Morning Buns | Colourful Recipes
500 g / 18 oz flour
12 g / 0.4 oz fresh yeast
1 egg beaten with2tbsps water
0.5 tbsp rock salt
………… … … …………
ကြက်ဥ တလုံးကို ရေ ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း နှင့် အတူ ကြက်ဥ ခေါက်ထားပါ …
ပေါင်မုန့်ဖုတ်တဲ့ Yeast ( တစေး )
7g ( 1/4 oz )
Yeast အထုပ် နောက်ကျော မှာ ဂျုံမှုန့် 500g (31/4 cups ) ကို အခု Yeast တထုပ်စာ ပါ …
YouTube ဗီဒီယို အတိုင်း yeast ကို အိမ်မှာ 12g မထည့်ပဲ 7g ပဲ သုံးထားပါတယ် …
1/3 cup =22/3 oz
ဂျုံမှုန့်ကို21/3 cups ထည့်ပါ ….
ထောပတ် – ၁ အောင်စ လောက် ထည့်ပါ…
၄ အောင်စ ထောပတ်တုံးရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ထည့်ပါ …
( ဓာတ်ပုံမှာ ထောပတ် အနေအထား မြင်စေချင်လို့ ၄ အောင်စ ထောပတ် ၂ တုံးကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ထားပါတယ် .. )
သကြား – 1/8 cup = 1 oz
နွားနို့ – 275 ml
ချိန်ခွက် .. ဒီဘက်ခြမ်းကနေ ကြည့်ရင် 275 ml က အောင်စ နဲ့ ဆိုရင် 1 cup ကျော်ကျော်လေး ရှိပါတယ်
( ဂျိတ်ကောက်ပုံစံ မွှေစက် ဆို ပိုကောင်းပါတယ် ..
အိမ်မှာတော့ ဒီ မွှေစက်ပဲ ရှိလို့ ဒီ မွှေစက် နှင့် မွှေတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ် )
လက်ကိုင်ပုဝါ ဖြင့် မိနစ် ၃၀ လောက် အုပ်ထားပေးပါ …
( တနာရီလောက် လက်ကိုင်ပုဝါ ဖြင့် အုပ်ထားလည်း ရပါသည် … )
လက်ကိုင်ပုဝါ ဖြင့် နာရီဝက်လောက် အုပ်ပေးထားလိုက်ရင် ဂျုံသားတွေက Yeast တန်ခိုး နဲ့ ဖောင်းကြွနေပါလိမ့်မယ် …
ဂျုံသားထဲမှာ ခိုနေသော လေများ ထွက်သွားအောင် လက်သီးဖြင့် ခပ်နာနာလေး ထိုးလိုက်ပီး ဂျုံများကို ပန်းကန်လုံးထဲမှ ထုတ်လိုက်ပါ …
ဂျုံချောင်းကို တပတ်လျှို လေး ထုံးပေးလိုက်ပါ … ( ဆံထုံး ထုံးသလို ) ..
မုန့်ဖုတ်ဗန်းပေါ်က မုန့်ဖုတ်စကူပေါ် တင် ပီးလျှင် လက်ကိုင်ပုဝါဖြင့် မိနစ် ၂၀ လောက် အုပ်ထားပါ …
ကြက်ဥ တလုံးကို .. ရေ ထမင်းစားဇွန်း –2ဇွန်း နဲ့ ခေါက်ထားတဲ့ အရည်ကို စုတ်တံလေး နဲ့ ပေါင်မုန့် ကို နေရာ အနှံ လိုက်သုတ်ပေးပီး နောက် …
၁၅ မိနစ် မုန့်ဖုတ်အပီး ခရုပုံစံ ပေါင်မုန့်များ ….
ကိုယ့် ဒီနေရာလေးမှာ .. အတွေ့အကြုံလေး တခု နဲ့ ပြောပြပေးချင်တာက …
ဂျုံကို စက် နဲ့ နှယ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် … လက်နဲ့ နှယ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဂျုံကို နှယ်နေတုန်းမှာ ရေ ( သို့ ) နွားနို့ ( သို့ ) ထောပတ် အရည်ကို ထည့်ပီး နှယ်သွားပါ …
နွားနို့ကို ကြွေဇလုံထဲ အရင် ထည့်ပီးမှ ဂျုံမှုန့် ထည့်ပီး နှယ်ရင် အဆင်မပြေတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ် ..
( အားလုံး ပါပဲ .. ဆန်မှုန့် ၊ ကောက်ညင်းမှုန့်၊ ဂျုံမှုန့် နှယ်တာ အမှုန့်တွေကို ထည့်ပီးမှ ရေကို ဖြည်းညင်းစွာ ထည့်ပီး လက်နှင့် ဖြစ်ဖြစ် .. စက်ဖြင့် မွှေပါ )
မုန့်ဖုတ်တဲ့ အခါမှာ oven ကို ပူနေအောင် ကြိုပီး မိနစ် ၂၀ လောက် ကြိုဖွင့်ထားပေးပါ ….
oven ထဲ ထည့်တဲ့ အခါမှာလည်း oven အလယ် နေရာမှာပဲ မုန့်ဖုတ်မယ့် ဗန်းကို ထားပါ …
အိမ်မှာ အုန်းသီးဖတ်လေးတွေ ရှိတာနဲ့ ပေါင်မုန့်လုံး ထဲ ဌာပနာ လိုက်ပါတယ် …
အုန်းသီး ဖတ်များဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သော မုန့် .. ချက်နည်းများ
အုန်းသီး အိတ်ပေါ်မှာ ပါသော မုန့်ဖုတ်နည်း နောက်တမျိုး …
ဂျုံလုံး လုံးလေး ဆိုရင်တော့ စားပွဲပေါ်မှာ ဂျုံကို လက်နှင့် ဖိပီး လိမ့်ပေးလိုက်ရင် ဂျုံက လုံးသထက် လုံးသွားပါလိမ့်မယ် ..
အဲဒီ ဂျုံလုံးကို ပြားပြားလေး လုပ်လိုက်ပီး အုန်းသီးဖတ်ထည့် …
အနားစ လေးတွေကို ပြန်စု လိုက်ပီး
အလယ်မှာ စုနေတဲ့ ဂျုံ ထုံးကို ခပ်ပြားပြား ပြန်ဖိလိုက်ပါ ..
( ပေါက်စီ ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ကွတ်ကီး စကူ သေးသေးလေး ကပ်ပီး ပေါင်းလိုက်ပါတယ် … )
ပက်လက်လှန်လိုက်ရင် တဖက်က ခပ်ပြားပြား ဂျုံလုံး အနေအထား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် …
oven foil ထဲမှာ ကွတ်ကီး စကူ ခင်းပီး ဂျုံလုံးတွေကို စီထားလိုက်ပါ …
လက်ကိုင်ပုဝါဖြင့် မိနစ် ၂၀ လောက် အုပ်ထားပါ …
တဆက်တည်းမှာပဲ .. oven ကို 350ºF နံပါတ် ထားပီး ကြိုဖွင့်ထားပါ …
မိနစ် ၂၀ ပြည့်လို့ လက်ကိုင်ပုဝါကို ဖယ်လိုက်ရင် Yeast တန်ခိုးဖြင့် ဂျုံလုံးများ ဖြောင်းကြွနေတာကို မြင်ရပါလိမ့်မည် …
ကြက်ဥ အရည်ကို စုတ်တံဖြင့် နေရာ အနှံ သုပ်ပေးပီး နောက် ….
နှမ်းလေး ဖြူးပေးပါ …
350 ºF – 30 မိနစ်လောက် ဖုတ်ပေးပါ …
ပေါင်မုန့် တလုံးခြင်းစီ ကြက်ဥ အရည်သုပ်ပီး မုန့်ဖုတ်လျှင် …
preheat oven ဖြင့် …
375 ºF – 15 မိနစ်
ပန်းပွင့်ပုံ ပေါင်မုန့်များ ဂျုံလုံး ဆက်ထားလျှင် …
350 ºF – 30 မိနစ်
လောက် မုန့်ဖုတ်မှ ပေါင်မုန့် ဂျုံသား များ အလယ်မှာ ဆက်နေသော ဂျုံသား အတွင်းပိုင်း များ ကျက်ပါလိမ့်မည် …
ပန်းပွင့်ပုံ ပေါင်မုန့်လေးပါ …
ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ပေါင်မုန့်ဖုတ်ထားတဲ့ အုန်းသီးပေါင်မုန့် ….
ခရုပုံစံ မနက်ခင်းစာ စားတဲ့ ပေါင်မုန့်များ ဖြစ်ပါတယ် ….
သူ ချည်း သပ်သပ် စားရင်လည်း အရသာ ရှိပါတယ် ..
ငါးသေတာ နှင့် တွဲဖက် .. စားသောက်ရင်လည်း စားလို့ ကောင်းပါတယ် …
ခရုပုံစံ .. ပေါင်မုန့် အတွင်းပိုင်း အနေအထား …
သူ့ကို တခု ချင်းစီ မုန့်ဖုတ် တာမို့ preheat oven ထဲမှာ 375ºF – ၁၅ မိနစ် လောက် မုန့်ဖုတ်ထားလိုက်ရင် ရပါပီ …
အတွင်းပိုင်း အနေအထားပါ မုန့် ကျက်ပါတယ် ….
ပန်းပွင့်ပုံ ပေါင်မုန့်ထဲကမှ ပေါင်မုန့်လုံး တလုံးကို ဖဲ့ယူလိုက်တဲ့ အတွင်းပိုင်း ပေါင်မုန့် .. မုန့်ကျက်နေတဲ့ အနေအထား …
ပေါင်မုန့်လုံး ထဲမှာ .. ဘာမှ မထည့်ပဲ .. ပေါင်မုန့်ဖုတ်လို့ ရသလို …
ပေါင်မုန့်လုံးထဲမှာ .. ပဲ .. အုန်းသီး .. ပူတင်း .. ခရမ် … ကြက်အူချောင်း sausage များ .. အမျိုးစုံ ..
ကိုယ် ကြိုက်နှစ်သက်ရာများ ထည့်သွင်းပီး ပေါင်မုန့် ဖုတ်လို့ ရပါတယ် …
Credit – YouTube : http://youtu.be/kFFGgBVrlnI
By Thet Nandar • Posted in Bread, Cake & Cookie Recipe, Cooking Ingredients	• Tagged မနက်စာ ပေါင်မုန့်, colourful recipes blog, food, Morning Buns
4 comments on “Morning Buns”
August 22, 2012 @ 12:29 am
I love the MORNING BUNS and really delicious.
Pingback: Bunny Buns | Colourful Recipes
Pingback: Turtle buns | Colourful Recipes
Pingback: ကိုယ့်ဘက်ကိုယ့်ယက်သော လိပ် | Thet Nandar Family